Ividiyo incoko amagumbi ngaphandle ubhaliso - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Kuphila incoko FireChat yi-Internet umqhekezi
Internet unxulumano Wi-Fi okanye iselula womnatha
Kunye IOS7 app, inkcazo emfutshane ke Multipeer udibaniso-sikhokelo, uyakwazi ukunxulumana kunye abahlobo bakho kwaye switsha phakathi kwe mobile izixhobo ka-elizayo kwaye Get Kakuhle
Ngexesha elinye, esi sikhokelo inokusetyenziselwa ukunxulumana FireChat Kumgca, Abahlobo Umgca, kwaye nkqu Dlala Umgca, kwaye kukho kwa Deli diner ezikufutshane.
Zisekhona ezininzi ezahlukeneyo zonxibelelwano apps kwiindawo zentengiso, ukususela App Store kwi-billion-dollar WhatsApp, yokuzila-lokukhula kwaye ethandwa kakhulu Den kanjalo iimfuno ukudibanisa yonke into. FireChat kanjalo unako ukusebenza kunye Umgca-Manani Abahlobo kwaye nkqu Umgca Dlala, kodwa mobile womnatha imisebenzi ngenxa traffic jams, ezifana subway rides, concerts, okanye ibhola ekhatywayo. Uza ayisasebenzi kufuneka usebenzise FireChat kwaye kubalulekile ngakumbi convenient ukusebenzisa ukuba ufuna ngaphandle nokubhalisa okanye ukungena kwi-nge-Facebook. Dibanisa oku kunye nokungabikho okungaziwayo apps ukuba akhange na ukuba egciniweyo kwixesha elidlulileyo kwi-imeyili okanye intlalo-media, kwaye zinezichazi igama lomsebenzisi ukuba kuyacetyiswa ukuba utshintshe kangangoko kunokwenzeka. Ngelishwa, kukho akukho cellular networks ukuba unako uvavanyo i-app kwi-umntu, ngoko ke intonga kunye ukuze umisele yefowuni yakho ukuba thumela i-data phezu Wi-Fi cellular networks.
Eyona nto ufuna ukuyenza ngu isijamani yayo i-Bluetooth
Kwi - " A " indlela, uyakwazi ukuyisebenzisa ukuba zithungelana kunye nabahlobo ngaphandle ekubeni 10 meters kude ukusuka kwi-Intanethi udibaniso, kodwa ilayini esuka embindini unako kwandiswa sebenzisa mesh womnatha, ubukhulu umgama ngu 10 meters. Umzekelo, abantu ababini kwaye FireChat emi 15 meters kude andinaku nkqu zithungelana.
Ngexesha unxibelelwano kubalulekile limited ukuba uthumela imiyalezo iifoto, kwaye musa ukuthumela amakhadi okuposa kunye enkulu iifoto enako idityanisiwe.
Kwi-iPhone 5 umfanekiso, a wathumela umnxeba kuthatha malunga ne-10 imizuzu ukugqiba.
Ngelishwa, udibaniso ilahlekile kwaye andisayi kubuya i lost ixesha ukuthumela umyalezo.
Ukongeza, FireChat connects kwi Internet kule "ezikufutshane" indlela, nto leyo ifuna i-global incoko.
Emva sebenzisa, kubalulekile umonakalo kwi-incoko ngenxa ngonaphakade ngoko ke epheleleyo iintshabalalo.
I-app izicwangciso ingaba kakhulu ibuthathaka kwaye kuphela tshintsha igama lomsebenzisi kwaye kuvumela ukuba kungasebenzi i-app ke, amakhonkco kuba ithumela cofa indawo. FireChat imisebenzi Vula Igadi ingu omtsha osemqoka, app ababhekisi phambili njengoko i-base, kodwa kanjalo abo mamela ingaba thatha ukongeza. Andiqondi ukuba FireChat uza luncedo everyday in life, ukususela kwi-Intanethi kanjalo Hiking ezintabeni, ukuba usetyenziso ufakelo ayikho kulindeleke, kwaye ukuba inqwelo moya, womnatha ayisayi ilawulwe ngendlela congested state. Kwesinye isandla, ndiya kutyhila ezinye izinto ukuba awuqinisekanga, kwaye inani assumptions ukuba awunokwazi ukwenza kwimeko usebenzisa zidibene noqhagamshelwano-sikhokelo.
Real-time webcam Germany
ukuphila ngesondo Dating incoko ngaphandle ividiyo esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi ne-girls esisicwangciso-mibuzo roulette ividiyo incoko esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi free ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso kwaye free omdala Dating eyona incoko roulette erotic ividiyo iincoko kuhlangana nawe kuba budlelwane